မြန်မာမွတ်စ်လင်မ် စည်းလုံးခြင်း၏အင်အား: ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်သို့
အခု ဟိဂျိရီ ၁၄၃၁ ခုနှစ် (၂၀၁၀)၊ ကမ္ဘာ့လူ့အိမ်ထောင်စုကြီးဟာကြီးသထက်ကြီးလာပါတယ်။ လူတွေမှာ Quality နဲ့ Quantity ဆိုတဲ့နေရာမှာ အလွန်ကွာခြားနေပါတယ်။ ကမ္ဘာ့လူအနဲစုမှာ ပညာတတ် လူတော်များ (Quality) ဖြစ်ကြပြီး ကမ္ဘာ့လူအများစုမှာ အလယ်အလတ် ဆင်းရဲသူများ (Quantity)၊ ပညာချို့တည့်သူများဖြစ်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်သူများ၊ စီးပွါးရှင်များ၊ အဖွဲ့အစီးများမှ အကြီးအကဲများဟာ ချမ်းသာသူ၊ အလယ်အလတ် လူတန်းစားများမှဖြစ်ကြပါတယ်။ သို့သော်ထိုအုပ်ချုပ်သူများထဲတွင် အချို့သည် လူဆင်းရဲမှ ထူးချွန်ပြီးတက်လာကြသူများလည်းရှိကြပါတယ်။ *
လူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်းမှာ အရေးကြီးနေရာများတွင် ဝင်ရောက်အလုပ် လုပ်နေသူများမှာ အမျိုးသားများတင်မက အမျိုးသ္မီးများလည်းရှိကြပါတယ်။ ထိုသို့ကမ္ဘာ့ ထိပ်သီးနေရာများ၊ အရေးကြီးသောနေရာများတွင် မွတ်စလင်မ် အမျိုးသ္မီးများလည်းရှိကြပါတယ်။ သို့သော် ကမ္ဘာ့ ဒုတိယ အများဆုံးဖြစ်သော မွတ်စလင်မ်တို့သည် ဒီနေ့ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်၌ဝင်ရောက်လှုပ်ရှားနေသော မွတ်စလင်မ် အမျိုးသ္မီးများသည် အခြားဘာသာများထက်နဲနေသေးသည်။*
အာရှ၊ အာဖရိက၊ အာရပ် နိုင်ငံများတွင် လူဦးရေများသော်လည်း မိန်းမ - ယောက်ျား ခွဲခြားထားသည့်ရှေ့ခေတ် မိရိုးဖလာများကြောင့် အမျိုးသ္မီးများသည် Quantity သာများပြီး Quality နှင့်ထွက်ပေါ်လာနဲနေပါတယ်။ *မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံအများစု အဘယ်ကြောင့် ဆင်းရဲနေရသနည်း ???*
အချို့သော မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများတွင် အမျိုးသ္မီးများကို လင်ယူသားမွေးရန် အိမ်မှုရေးလုပ်ရန်ဟုသော ဓလေ့ထုံးတန်း အစဉ်အလာများရှိပြီး အမျိုးသားများသာ ပညာသင် အလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အရေးရှိခဲ့တယ်။ အခုလည်း ၎င်း ဓလေ့ထုံးတန်းဟာ အချို့လူတွေမှာရှိနေဆဲဖြစ်တယ်။ ဒီနေရာမှာ အနောက်တိုင်းသားများအကြောင်းကိုလည်းတင်ပြပါမည်။ အနောက်တိုင်းသားများမှာ ယောက်ျား - မိန်းမ နှစ်ရပ်စလုံး ပညာသင်ယူကြတယ်။ အလုပ်လုပ်ကြတယ်။ အိမ်မှုရေးကို တစ်ယောက်တစ်ဝက် တာဝန်ယူကြပါတယ်။ အနောက်တိုင်းသားများမှာ ယောက်ျား - မိန်းမ နှစ်ရပ်စလုံး ပညာတတ်များထွက်ပေါ်လာပြီး ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်မှာ မိမိလိုရာဆွဲယူ လှုပ်ရှားနေချိန်မှာ မွတ်စလင်မ်လူထုမှ တစ်ဝက်သည် ပညာမတတ်ဖြစ်နေလျှင် အဘယ်သို့လျှင် စီးပွါးရေအရ အနောက်တိုင်းတို့ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်တော့မည်နည်း။
*တစ်နေ့ ကလေးနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်သော ပါကစ်တန် အမျိုးသ္မီးတစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမ၏သားအကြီးလေးက ၃ နှစ် နဲ့ နောက် လမ်းသွားတတ်စ သ္မီးလေ ၁ နှစ်ခွဲအရွယ်လေးကိုခေါ်လာပါတယ်။ *
ထိုပါကစ်တန် အမျိုးသ္မီးကို သား သ္မီးတွေကြီးလာရင်ဘာဖြစ်စေချင်လည်းဟုအခြားလူများက မေးကြရာ သူမက သူမ၏ သားကို ဆရာဝန်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ သူမ၏သ္မီးလေးကိုတော့ အိမ်မှုရေးကျွမ်းကျင်အောင်သင်ပေးပြီး အရွယ်ရောက်တာနဲ့ အိမ်ထောင်ပေးစားမယ်လို့ဖြေကြားပါတယ်။ အဲဒီတော့ ခုံတွေကိုလက်နဲ့ကိုင်ပြီး လမ်း စလျှောက်နေတဲ့ကလေးမလေးကိုကြည့်ပြီး အော် သူ့ပညာရေးကို မိဘတွေရဲ့ဓလေ့ထုံးတန်းတွေနဲ့အညွန့်တုံးစေတော့မှာပါလားလို့ကြည့်ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိလိုက်ပါတယ်။ ပြည်ပသို့ထွက်ပြီးပညာသင်ယူနေကြတဲ့ ပါကစ်တန် အမျိုးသ္မီး များလည်းရှိပါတယ်။ ၎င်းတို့မှ အချို့မှာ ရှေ့ခေတ်မိရိုးဖလာ ဓလေ့ထုံးတန်းကို ကျင့်သုံးနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်။*စာရေးသူတွေ့ခဲ့ရသော တွေ့နေဆဲဖြစ်သော အာရပ်အမျိုးသ္မီးများမှာ ဘယ်နိုင်ငံက ကမ္ဘာ့ဘယ်နားမှာတည်ရှိမှန်းမသိ။ မိမိလူမျိုးသာအကောင်းဆုံးဟုထင်မှတ်နေကြပါတယ်။ မည်သည့်အရာမဆို မိမိကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်မှုကိုမလုပ်တတ်ကြပါဘူး။ ၎င်းတို့မှာ တိုင်းတစ်ပါးမှ မွတ်စလင်မ်ကိုပင် ကုရ်အာန် မဖတ်တတ်ဟုထင်ကြသည်။ အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ တန်ခိုးတော်ကြောင့် ကုရ်အာန်သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးပြန့်ခဲ့သည်ကို ၎င်းတို့မှ မသိကြပါ။ အချို့သောမွတ်စလင်မ် အမျိုးသ္မီးများမှာ အထွေ ထွေ ဗဟုသုတ အလွန်နဲပါးပြီး ခင်ပွန်းရှာစာစား ကလေးမွေး အိမ်ကြည့်ရင်းနှင့် ဘဝကိုကျေနပ်နေခဲ့ကြပါတယ်။ *ဘာသာခြားအချို့မှ မွတ်စလင်မ်အပေါ်ရန်ညှိုးထားသော မလိုတမာ မုန်းတီးကြသော (အထူးသဖြင့် ယဟူဒီဂျူးလူမျိုးများ) သည် မိမိမြို့ရွာ၊ နိုင်ငံ၊ နေအိမ်များဖြက်စီးကြသောအခါ၊ မိမိ အားကိုးရာခင်ပွန်းသေဆုံးသွားသောအခါ မုဆိုးမဘဝနှင့် ဘဝအခက်ကြီးခက်ကြတော့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ ယခင်မှချမ်းသာကြွယ်ဝခဲ့သူများမှာ ကမ္ဘာ့ဒုက္ခသည်များစရင်းဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။ *အစ္စလာမ်သာသနာတော်နှင့် မွတ်စလင်မ်လူထုအား ရန်ညိုးထားသူများ၏ချယ်လှယ်မှု၊ ဖျားယောင်းမှုတို့သည် မိမိမွေးရာအရပ်သို့ (influence) ကူးစက်ဝင်ရောက်လာသောအခါ မိမိတို့သည် လူရမျိုးရေး ဘာသာရေးတွင် မျိုးစဉ်မျိုးဆက်အနှိမ်ခံ အနိုင်ကျင့်ခံနေရတော့ပါတယ်။ လူတွေမှာ အထွေထွေဗဟုသုတမရှိပါက ပညာကိုမရှာဖွေပါက မိမိအနိုင်ကျင့်ခံနေရသည့်ပြဿနာ၏အရင်း ဘယ်ကလာလဲမသိနိုင်၍ ဖြေရှင်းရန်လည်း ခက်ခဲလှ၏။ ထို့ကြောင့်ရှေ့မှ မိမိ၏ ဘိုးဘွား မိဘနှင့် မိမိကိုယ်တိုင်ပညာကို စည်းပူးရမည်။ မိမိပညာအမျှော်အမြင်နှင့် မိမိ၏မျိုးဆက်သစ်ကို ကုရ်အာန်နှင့်အတူလမ်းမှန်ပြရမည်။ ဘာသာရေးပညာနှင့် ခေတ်ပညာသည်လွန်စွာအရေးကြီးပါတယ်။*တမန်တော်မြတ်မိုဟာမတ် (ဆွ) ကိုယ်တိုင်မွတ်စလင်မ်များ၏ ပညာရေးကိုအားပေးခဲ့သည်မှာ ဟာဒီးစ်များတွင်အထောက်အထားများစွာရှိပါတယ်။*အစ္စလာမ်သာသနာတော်သည် တိုက်စစ်မဟုတ်ပါဘူး။ ခံစစ်သာဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်ကိုတိုက်ခိုက်လာမှသာ မိမိဘက်ကပြန်တိုက်ကြပါတယ်။ မွတ်စလင်မ်အပေါ်ရန်ညိုးထားသူများမှာ မွတ်စလင်မ်များနှင့်အမြဲ (compete) ပြိုင်ဆိုင်နေတာကိုသတိချပ်ပါ။ ၎င်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ အစ္စလာမ်သာသနာအားဖြက်ဆီးရန်နှင့်မွတ်စလင်မ်ကိုကမ္ဘာမှ ပပြောက်သွားရန်ဖြစ်တယ်။ မွတ်စလင်မ်များဆင်းရဲသထက်ဆင်းရဲအောင် လောကီရေးတွင်နစ်မွန်းနေအောင်နည်းမျိုးစုံသုံးပြီးဖြက်ဆီးနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ *အခုလို ကမ္ဘာမှာ crisis အချေအနေတွေမှာ compete လုပ်နိုင်မှတော်ယုံကြမယ်။ အထူးသဖြင့်စီးပွါးရေးမှာပါ။ Compete မရှိဘဲ အေးတိအေးစက်နဲ့ဆိုရင် လူမှာတိုးတက်မှုဆိုတာလဲနှောက်နှေးနေပါတယ်။ ထို့ကြောင့်မိမိ၏ မျိုးစဉ်မျိုးဆက်အားအနှိမ်ခံဘဝသို့ပို့ခဲ့သောသူများနှင့် ပြန် Compete လုပ်ယူရပါမယ်။ မိမိနိုင်ငံ မြို့ရွာ မိသားစု နှင့် မျိုးဆက်များတိုးတက်စေချင်ရင် ယောက်ျား - မိန်းမ နှစ်ရပ်စလုံး ကျိုးစားရမယ်။ *ဒီနေ့မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးများ မျက်လုံးပွင့်သင့်ပါပြီ။ လူအဖွဲ့အစည်းထဲက ဓလေ့ထုံးတန်းတစ်ရပ်ဟာ သူ့ခေတ်နဲ့သူအသုံးဝင်ခဲ့ပေမဲ့ အခုလိုစစ်တွေဖြစ်ပွါးနေတဲ့အချိန် စီးပွါးရေးကျပ်တည်းနေတဲ့ အချိန် ကမ္ဘာ့လူဦးရေများပြားထူထပ်ပြီး Identity crisis ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ အဲဒီဓလေ့ထုံးတန်းဟောင်းတွေဟာအသုံးမဝင်တော့ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ယောက်ျားရယ် မိန်းမရယ်လို့ ပညာရေးမှာ ခွဲခြားမနေသင့်တော့ပါဘူး။ မိမိ ယောက်ျား နဲ့ ကလေး ကလွဲလို့တခြားကိစ္စစိတ်မဝင်စား၊ မသိမတတ်၊ ကိုယ့်မိသားစု အစဉ်ပြေနေရင်ပြီးတာဘဲလို့ စဉ်းစားလို့မရပါဘူး။ လူမှုရေး ဘာသာရေး ပြဿနာများဟာ မိမိ မိသားစု ဆွေမျိုး အိမ်နီးနားချင်းထံရောက်မှာကို မမေ့ပါနှင့် လူ့အရည်အချင်းဆိုတာ လုပ်လေရလေပါဘဲလို့ပြောချင်ပါတယ်။
*ဒီနေ့မွတ်စလင်မ်အမျိုးသ္မီးများ ကမ္ဘာ့ဇာတ်ခုံပေါ်တက်ရန် အစဉ်သင့်ဖြစ်ကြပြီလား ???
Posted by Ordinary person at 6:25 PM